Spin Digital 8K HEVC မီဒီယာဖွင့်စက်သည်မြန်ဆန်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော I / O အတွက် AJA KONA5နှင့် Corvid 88 ကိုအသုံးပြုသည်။ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဒစ်ဂျစ်တယ် 8K HEVC Media Player ကိုသြဇာ Aja KONA5နှင့် Corvid 88 မြန်ဘို့လည်, Flexible I / O
အခုတော့ကြောင်း 4K ထုတ်လုပ်မှု, ထုတ်လွှင့်အတွက်ထက်ကျော်လွန်တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ, အားကစားနဲ့ off ခေါ်ဆောင်သွားပြီ, 8K နှင့် 16K ထုတ်လုပ်မှုပိုမိုမြင့်မားတဲ့ resolution ဗီဒီယိုကိုဒီကုဒ်ဒါနှင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ခြင်း tools တွေကိုများအတွက်ဝယ်လိုအားချက်ချင်းမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်ကြီးမားဒီထက်မက။ high-performance ကို 8K HEVC မီဒီယာပလေယာ - မီဒီယာဖြေရှင်းချက်ပေးသူလည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆိုပါလည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Media Player ကိုနှင့်အတူဤကြီးထွားလာလိုအပ်အမှာစကားပြောကြား။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းစံဟာ့ဒ်ဝဲပါဝင်သောကြောင့် Real-time HEVC / H.265 ဒီကုဒ်ဒါနှင့်ပြန်ဖွင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် UltraHD PC ကွန်ပျူတာစနစ်များကိုပေါ်ဗီဒီယိုနှင့်အကြီးစားဖြစ်ရပ်ဘဏ်ဍာ, ထုတ်လွှင့်, virtual reality (VR) အတွေ့အကြုံများနှင့်ပိုပြီးအဘို့အ 4K, 8K နှင့် 16K ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသံနှင့်ဗီဒီယိုများအတွက် I / O, စနစ်တစ် KONA5ကဒ်နှင့်တစ်ဦး Corvid 88 Multi-စီး, Multi-format နဲ့ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည်။
"Aja ရဲ့ KONA5နှင့် Corvid 88 ကတ်များမြင့်လောင်းကြေးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံး resolution ကအကြောင်းအရာနဲ့အလုပ်လုပ်ရသောအခါအလွန်အရေးပါအရာ, သူတို့ကအတော်လေးမြန်ဆန်စွာနေဖော်ပြခြင်းမကို system ကိုဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်စေလိုအပ်တဲ့ 8K 12G-SDI နှင့် 3G-SDI လက်ငင်းပေး ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များအတွက်လည်ပတ်, "Mauricio Alvarez Mesa, CEO ဖြစ်သူဒစ်ဂျစ်တယ်လှည့်ဖျား, shared ။
အဆိုပါကုမ္ပဏီအစပိုင်းတွင်၎င်း၏စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲကိုဖြည့်ဖို့ SDI-connected ဗီဒီယိုက output ကိုဘုတ်အဖွဲ့လိုအပ်ပေလိမ့်မည်သည့် 5G-SDI နှင့် 88G-SDI မှတဆင့်အနေနဲ့ 8K ဗီဒီယိုက output ကိုချေါစနစ်ကြောင့် Aja KONA 12 နှင့် Corvid3ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ယင်း၏နည်းပညာသုတေသနလုပ်ငန်းများတွင်လည်ဒစ်ဂျစ်တယ် Aja ရဲ့ရေးသားသူထုတ်ကုန်များနှင့် software များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာကိရိယာအစုံကိုဖြတ်ပြီး လာ. , လျင်မြန်စွာသူတို့လက်ျာဘက်မထိုက်မတန်ခဲ့ကြသည်သဘောပေါက်လာတယ်။
"ကျနော်တို့ကကွဲပြားခြားနားသောဖြေရှင်းနည်းများအကဲဖြတ်, ဒါပေမယ့်ကိုသာ KONA5နှင့် Corvid 88 ကျွန်တော်တို့လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်" Mauricio shared ။ "ဒီ SDK ကိုဗီဒီယိုအချိန်ကိုက်ထိုကဲ့သို့သော 8Kp60 ပြန်ဖွင်အဖြစ် applications များတောင်းဆိုများအတွက်မှန်ကန်သောကြောင်းရေးအတွက်အလွန်အရေးပါအရာ, ထိုကဒ်များကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုအနိမ့်-Level ထိန်းချုပ်မှုပေးပါ။ ထို့ပြင် SDK ကို 8Kp120 သို့မဟုတ် 16Kp60 ပြန်ဖွင့်အပါအဝင်ပင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ကြောင်း applications များ, အဘို့အမျိုးစုံ devices တွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ "
KONA5အကြောင်း
KONA58G-SDI I / O ထောက်ပံ့ထားတဲ့ 3.0 လမ်းသွား PCIe 12 ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ I / O ကဒ်သည်နှင့် HDMI စက်သို့မဟုတ် Thunderbolt ™ 2.0-connected ကိုယ်ထည်အဘို့အ3စောင့်ကြည့်ရေး / output ကို။ KONA54K ထောက်ခံပါတယ် /UltraHD နှင့် HD တစ်ခုတည်း cable ကိုကျော်မြင့်သောဘောင်နှုန်းနက်ရှိုင်းသောအရောင်နှင့် HDR Workflows ။ developer များအဘို့, Aja ရဲ့ SDK ကို input ကိုသို့မဟုတ် output ကိုမျိုးစုံကို 5K စီးဖွင့်, KONA 12 Multi-ရုပ်သံလိုင်း 4G-SDI I / O ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ www.aja.com/products/kona-5
Corvid 88 အကြောင်း
Third-party developer များကကမ်းလှမ်းဖြေရှင်းချက်သို့ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Corvid ထုတ်ကုန်များ၏ Aja ရဲ့မိသားစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, Corvid 88 တစ်ခု 8 လမ်းသွား PCIe 2.0 ကဒ်ကနေတဆင့် I / O High-သိပ်သည်းဆ Multi-ရုပ်သံလိုင်းဗွီဒီယိုနဲ့အသံကယ်တင်တတ်၏။ Corvid 88 ရဲ့ရှစ် 3G-SDI ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့ input ကိုသို့မဟုတ် output ကိုအဖြစ်အစီအစဉ်တ set နှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဗီဒီယို Format ကိုထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ, ရှိသမျှကို formats အတူတူနာရီအချိန်ကိုက်အသုံးပြုနိုင်သည်ပေးအပ် - I / O High-density ကိုလိုအပ်ကြောင်း applications များအတွက်အများဆုံးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေး, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ပလေးအောက်ကိုဆာဗာများ, ထည့်သွင်းသည့်ဆာဗာများ, ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကိုစနစ်များနှင့်ပို။ www.aja.com/products/corvid-88
လည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို Technologies က GmbH သည်အကြောင်း
လှည့်ဖျားဒစ်ဂျစ်တယ် Ultra-အရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယို applications များရဲ့နောက်မျိုးဆက်များအတွက် high-performance ကိုဗီဒီယိုကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ လည်ဒစ်ဂျစ်တယ် software ကိုဖြေရှင်းချက်အလွန်မြင့်မားတဲ့ resolution (4K, 8K နှင့် 16K) အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့တိုးမြှင့်မှုများမြင့်မား dynamic range ကိုမြင့်မားသည် frame နှုန်းကျယ်ပြန့်အရောင်အစအဆုံးအကုန်, နှင့်ဗီဒီယို° 360 လိုအပ်ကြောင်းမီဒီယာ application များကို enable ။ လည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘာလင်အခြေစိုက်နှင့် UHD-TV ကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့ Screen ကို Display, နှင့်နောက်မျိုးဆက် virtual reality အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဖောက်သည်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ B2B ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကြှနျုပျတို့၏ website သို့သွားရောက်: www.spin-digital.com.
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-08-15
ယခင်: Aja ဂီယာ Janta တီဗီမှာဘီး Greases
နောက်တစ်ခု: AJA I / O Hardware သည် Brainstorm ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ Real-Time ဂရပ်ဖစ်နှင့် Virtual Set Solutions များကိုကူညီပေးသည်